BLI Quebec - Ụlọ akwụkwọ asụsụ na Canada
Ebe ụwa na-ezukọ.
Ọgaranya Ọgaranya Ebe
Quebec bụ obodo mara mma nke Canada. Obi nke asụsụ French na North America. Otu nke Europe na mpaghara ọhụrụ. N'ịbụ nke dị n'obere ọnụ mmiri dị na St-Lawrence River, Quebec City bụ otu n'ime obodo kachasị mma n'ụwa.
Obodo buru ibu na obodo French na isi obodo nke Quebec, Quebec City bụ ebe ị ga-etinye mmiri na French n'asụsụ French mgbe ị na-anụ ihe niile Quebec nwere ike inye, site n'ile anya na Tadoussac, ka mmanya na-atọ ụtọ na Townships dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ .
BLI Quebec na-agbasa n'elu ala abụọ nke ụlọ nke oge a dị n'etiti obodo Quebec, nke a na-enweta site na njem ọha na eze ma na-anọ n'ebe dị anya site na ntụrụndụ niile na ntụrụndụ nke mmasị.
BLI Quebec bụghị nanị na-enye ebe obibi imikpu n'ezie iji mụta asụsụ French, ma na-ahazikwa ụdị dịgasị iche iche iji nyere ụmụ akwụkwọ aka ịchọta obodo ahụ ma nakweere omenala French French pụrụ iche!